Labo Qof oo mid Maamule yahay oo lagu Dhaawacay Västerås
HomeWararka CaalamkaLabo Qof oo mid Maamule yahay oo lagu Dhaawacay Västerås
June 22, 2022 Wararka Caalamka, Wararka Maanta, Wararka Sweden 0
Labo nin oo mid ka mid ah uu yahay maamule dugsi sare ayaa si xun loogu dhaawacay fal dambiyeed halis ah oo ka dhacay bartamaha magaalada Västerås subaxnimadii Talaadada.
Wiil 16 jir ah ayaa xabsiga loo taxaabay kadib markii lagu eedeeyay isku day dil.
Siddeedii iyo qadar nusa saac ah ayaa nin dambiile ah waxa uu weeraray labo nin oo ku sugnaa garaash ku dhow goob ganacsi oo ku taal magaalada Västerås.
Mid ka mid ah dhibanayaasha ayaa qaba dhaawacyo halis ah oo naftiisa halis gelinaya waxaana lagu sameynayaa qalliin degdeg ah. Ninka kale ayaa dhaawac halis ah soo gaaray, sida uu ku qoray boggiisa gobolka Västmanland. Sida laga soo xigtay xogta VLT , dhacdada waxaa lagu tilmaamay fal halis ah.
– Waxa na soo wacay telefoonno badan markii ay dhacday dhacdada. Dadka ayaa sheegay inay arkeen dhowr qof oo dhaawac ah oo dhiig baxaya, sidoo kalena ay arkeen qof looga shakisan yahay inuu falka geystay. Waxaan joognay goobta hal daqiiqo gudaheed waxaana si dhaqso ah u xakamenay xaalada oo aan qabanay qofka, ayuu yiri afhayeenka bilayska Magnus Jansson Klarin oo u waramay TT.